डिसेम्बर 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, डीएनए, परीक्षण
शंकाको आधारमा गरिने परिक्षणलाई डीएनए परीक्षण भन्दछन् । डीएनए परिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था कुनै शिशुको पिता को हो भनेर पत्ता लगाउन निकै भरपर्दो भएकाले यस किसिमको जाँचको माग संसारभर बढेको पाइन्छ । त्यसका लागि सामान्यतः आमा, शिशु तथा संदिग्ध पिता भनेर आरोप लगाइएको व्यक्तीको परीक्षण गरिन्छ भने त्यसलाई डीएनए परिक्षण भन्दछन् । यस्तो परिक्षण शंका लागेको बेलामा गरिएको हुन्छ ।
मानव शरीरको प्रत्येक कोषिकाभित्र न्युक्लियस नाम गरेको एक अङ्गक हुन्छ । ती न्युक्लियसभित्र स-साना संरचना हुन्छन्, जसलाई क्रोमोजोम अर्थात् गुणसूत्र भनिन्छ । मानिसमा यसको सङ्ख्या ४६ हुन्छ । यिनै क्रोमोजोममा डीएनए अवस्थित हुन्छ । डीएनए तिनै तत्व हुन् जसले कुनै पनि जीवको आनुवंशिक गुण निर्धारण गर्छ।
डीएनएको पूरा नाम (डिअक्सिरिबो न्युक्लिक एसिड) न्युक्लियसका अतिरिक्त कोषिकाभित्र हजारौंको संख्यामा रहेका माइटोकन्ड्रिया नामक अङ्गकमा पनि डीएनए पाइन्छ । तर माइटोकन्ड्रियामा पाइने डीएनएले न्युक्लियसमा पाइने डीएनएले जस्तो जीवको आनुवंशिक गुण निर्धारण गर्दैनन् । माइटोकन्ड्रियाको प्रमुख भूमिका जीवका लागि अपरिहार्य ऊर्जा उत्पादन गर्नु हो र यसमा अवस्थित डीएनएको छुट्टै भूमिका हुन्छ ।
डीएनए निकै मसिना धागोजस्ता वस्तु हुन् जसको व्यास मानव शरीरको रौँभन्दा १४ हजार ४ सय गुण सानो हुन्छ । मानव शरीरको प्रत्येक कोषिकामा एकैनासका डीएनए हुन्छन् । तर सबै कोषिकामा सबै डीएनए एकै पटक क्रियाशील हुँदैनन् । कुनै अङ्गका कोषिकामा कुनै प्रकारका डीएनए क्रियाशील हुन्छन् भने अर्को अङ्गको कोषिकामा अर्कै डीएनए क्रियाशील हुन्छन् ।
← यस्ता छन् भगवान शिवको १०८ नामहरु
अस्वस्थ शरीरका लक्षणहरु →
सतुवा र यसको महत्व
फ्रेवुअरी 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
किन लगाइन्छ बिजुलीको झट्का ?
जुन 25, 2016 साइन्स इन्फोटेक किन लगाइन्छ बिजुलीको झट्का ? मा टिप्पणी गर्न मनाही छ
जुलाई 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1